Google Now on Tap dia 'Fikarohana Screen' izao. Androidsis
Google Now amin'ny Tap dia nantsoina hoe 'Fikarohana Screen' amin'ny Google beta farany
Ny beta an'ny fampiharana Google omaly dia nitondra zava-baovao ary naseho tamina horonantsary azavaiko ny fomba fametrahana 'Ao amin'ny Apps' hikarohana fifandraisana, mozika, hafatra ary maro hafa amin'ireo fampiharana rehetra napetrakao amin'ny findainao; farafaharatsiny ireo izay mifanaraka, satria miankina amin'ny developer fa izany no izy. Saingy tsy tamin'ny fisehoan'ny hitsin-dàlana 'In Apps', fa misy hafa koa.
Google Now on Tap dia izao dia izao fantatra amin'ny hoe 'Search Screen', anarana sahaza kokoa noho izay ataon'ity fampiasa ity ao aminy. Fantatra fa tsy afaka nanova anarana tsara an'ireo serivisy sy fampiharana natombony matetika i Google, noho izany dia hitantsika foana fa miova ny anarana aorian'ny volana maro mba hifanaraka kokoa amin'ny fampiasa azy ary hahafantatra tsara kokoa ny antony hanaovana izany.
Tsy milaza izahay fa ny fampiharana anao rehetra dia tsy misy dikany amin'ny anarany, toa ny Sarintany, Google Search, Drive na ny sary, fa misy indraindray mamela antsika ho gaga kely ho an'ireo fanovana anarana ireo. Ohatra, Google Now on Tap dia manandrana mamantatra izay eo amin'ny efijery mba hanomezana rohy sy fampahalalana ara-nofo izay tokony ho hitanao. Amin'izany fomba izany no amonjentsika ny tenantsika tsy hitady izay mahaliana antsika amin'ny zavatra eo amin'ny efijery.
Ny iray amin'ireo hatsaram-panahy avy amin'ny Google Now amin'ny Tap Fikarohana efijery, eny ve izany manery lava teny iray ianao eo amin'ny efijery, miaraka amin'ny gazety tsotra dia azonao atao ny mandika azy mivantana, izay mamonjy anao tsy mila mampiasa mpandika teny amin'ny Internet.
Ary tsy io ihany no malaza efa notanterahin'i Google, fa tsy izany Lasa «Fahano» izao ny karatra. Iray amin'ireo fanovana ireo izay hanome dikany bebe kokoa an'io Fikarohana Screen io ary noho izany dia takatra bebe kokoa ny fampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Now amin'ny Tap dia nantsoina hoe 'Fikarohana Screen' amin'ny Google beta farany
Xiaomi Mi Note 2, ity no ho terminal lehibe vaovao